Ahoana ny fanovana ny bara fampandrenesana Android | Androidsis
Androany dia te-hiverina amin'ity fizarana efa malaza amin'ny Androidsis ity izahay Fampiharana mahavariana ho an'ny Android, sehatra iray izay anohizanay manolotra anao hatrany ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android,. Fampiharana ampiasainay ovay ny bara fampandrenesana android ho an'ny manan-tsaina kokoa sy azo ovaina amin'ny toeranao.
Ny fampiharana, toy ny mahazatra ato amin'ity fizarana ity, dia afaka mampidina maimaim-poana tanteraka ho an'ny terminal Android mifanentana aminay, avy amin'ny magazay fangatahana ofisialy ho an'ny rafitra fiasa Google.
Ny fangatahana dia mamaly ny anaran'ny Zava-dehibe Snowball Ary araka ny nolazaiko anao, etsy ambany kely ianao dia ho afaka misintona azy mivantana avy amin'ny Google Play Store ary tsy mamela na dia euro iray aza izahay hanandrana.
1 Inona no atolotry ny Fampandrenesana Snowball antsika?
2 Sintomy ny fampahafantarana Snowball maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Inona no atolotry ny Fampandrenesana Snowball antsika?
Filazana Snowball, ankoatry ny fanompoana anay ka ovay ny bara fampandrenesana android Ho an'ny iray marani-tsaina kokoa, hahafahantsika manao ilay bara fampandrenesana na ridao fampandrenesana tena ilaina kokoa ao amin'ireo terminal izay manana sosona fanamorana mafy tokoa ary, ny ridao fampandrenesana na bara fampandrenesana dia tsy fahombiazana lehibe ary mbola tsy tena nahomby mahasoa antsika.
Miaraka amin'ny fampandrenesana Snowball dia hanana endrika tena mahaliana isika tena mitovy amin'ny bara fampandrenesana an'ny Android madio, mitahiry hatrany ny halavirana fa fahombiazana lehibe avy amin'ny mpamorona ny fampiharana.
Anisan'ireo lafiny tena manasongadina azy ny manasongadina ireto hevitra manaraka na asa manaraka ireto:
Fanoloana feno ny bara fampandrenesana tany am-boalohany an'ny terminal Android anao.
Azo atao ny manasaraka ny fampandrenesana ny fampiharana heverina ho manan-danja sy ny hafa rehetra.
Karatra fampandrenesana mahafinaritra amin'ny fomban'ny Google Now, miloko feno ary miaraka amin'ireo sary famantarana fampandrenesana miloko feno ihany koa.
Mety ho afaka mifandray amin'ny fampandrenesana voaray avy amin'ny ridao fampandrenesana mihitsy.
Fahafahana manakana ny fampandrenesana amin'ny rindranasa voafantina.
Fandraisana mivantana amin'ny System Toogles.
Hitsin-dàlana mankany amin'ny Calculator, jiro, fakan-tsary ary fikirana.
Safidy fanaingoana sy fanaingoana maro.
Sintomy ny fampahafantarana Snowball maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Ahoana ny fanovana ny bara fampandrenesana Android ho an'ny iray marani-tsaina
Carlos Roberts dia hoy izy:
Tsy misy fampiharana toy izany ao amin'ny Play Store ………
Valiny tamin'i Carlos Roberts